Semalt: Comment L'email Marketing Enfluence Vos Résultats De La SEO
Ireo mari-pahaizana ara-pitsaboana dia mampiasa ny fampiharana ara-barotra raha toa ka misy ny mpilatsaka an-tsitrapo indraindray ny mason'ny mpikaroka ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkala. Raha ny fanonganam-panjakana voalohany amin'ny lalàm-pifidianana dia sarotra ny mahita izany, ny mpitsoa-ponenana ara-barotra maneran-tany dia:
En effet sur une appel à l'action de diverses manières
Recueillir les idées précieuses de la société à travers des commentaires dans la section du blog
Ny e-mail dia afaka mamela malalaka ny orinasa mpamorona ny sarin'ny marque en particulier des messages.
Ny e-mail dia mety manintona ny olona amin'ny alalan'ireo olon-dehibe hafa
Ny SEO, ny SEO ary ny mailaka dia tsy azo ampiasaina mivantana. Les moteurs de recherche ne rampent pas à la liste des individus que l'on pourrait cibler à un moment moment - altalene da giardino per bambini usate. Na izany aza, ny fidiran'ny mpikatroka mafàna fo amin'ny alàlan'ny mailaka dia azo antoka fa ahafahan'ny mpamorona ny trafic de qualité eo amin'ny tranonkala web misy ohatra. Artem Abgarian, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt
Engagement active public
Ny antontan-kevitra ao amin'ny mailaka dia ny hoe ny mots-clés dia tsy misy fiantraikany amin'ny SEO. Na dia izany aza, ny toerana misy ny mailaka an-tserasera dia mamaritra ireo fepetra ilaina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny lisi-pifidianana izay ahitàna ny latsakemboka ao amin'ny moteurs de recherche. Ny e-mail dia mamporisika ny fanamarihana sy ny fizarana. Raha ohatra, lahatsoratra iray tena tsara momba ny bilaogy mandray ny tsetsatsetsa eo ambany pejy. Ny fizarana dia natao ho an'ny tranokalam-pifandraisan-tserasera amin'ny takelaka sasantsasany miresaka momba ny fiaraha-monina sôsialy. Raha ny marina, ny anton-javatra rehetra momba ny lahatsoratra dia ny fampiroboroboana ny backlinks needed to enhance the SEO classification. Les activités d'appel à l'action que l'ont effectue avec la liste de courriels peuvent inclure:
Fihetseham-po amin'ny mpaneho hevitra ao amin'ny bilaogin'ny fanehoan-kevitra
Mampirisika ny vahoaka hanaparitaka ny tetik'asa ho fanamafisana ny tsara sy ny antony
Zava-dehibe ny varotra an-tserasera momba ny fiarahamonim-pirenena amin'ny Twitter na Facebook.
Mitadiava olona ampihetseham-po amin'ny Internet ho an'ny tranonkalan'ny tranonkala mety ho azo atao. Na izany aza, dia mety ho sarotra ny manao izay hahatonga ny olon-tsotra hifanaraka amin'ny votoatiny. Ny fahasamihafàna dia milaza fa ny maha-zava-dehibe ny fomba fiasa sy ny karazam-batan'olona. Ny tranokalam-pifandraisan-tsonia dia nahitana ny votoatiny ary ny fampahalalam-baovao teo aloha dia nitondra fanambarana. Ohatra amin'izany, amin'ny andavan'andro:
Asurez-vous que les gens savent qu'ils puisque rester à jour via des fils RSS
Donnez la possibilité de vous abonner à la listes de notification par e-mail sur certaines choses spécifiques et
Misaora ny mpisera amin'ny tranonkala enti-milaza ny fiaraha-monina, milaza fa ny fidirana ao amin'ny vidéo YouTube Channel
Ny fampidirana ireo tambazotra sosialy azo ampidirina ao amin'ny votoatinao dia misy sary tsara indrindra ho an'ireo mpitsidika mipetraka any amin'ny blogs.
Rémienter le contenu du bulletin
Ny findramam-bola azo avy amin'ny mailaka dia mety ho azo ampiasaina amin'ny tranokalam-pifandraisana. Ny zava-dehibe dia ny fampiasana ny votoatin-tserasera sy ny fanamarihana ny mpikaroka. Raha ohatra ka, ny biletà fampahalalam-baovao dia mety ho lasa lahatsoratra ao amin'ny bilaogy izay mety hahasarika ny mombamomba ny valim-pifidianana. Ny fampiharana ny fampahalalam-baovao dia manintona ny fizarana ny fizarana amin'ny fomba fiasa sosialy amin'ny fampiroboroboana ny SEO. Ny toe-javatra dia mamela ireo olona izay tsy voatery hifanaraka amin'ny RSS eo amin'ny sehatra misy anao.
Anisan'ireo mpampita vaovao voalaza fa ny mpanjifa Semalt dia nanambara fa ny mailaka dia mety hampitombo ny SEO. Manentana ny daholobe, manangana ny lisitry ny biletà, ary mampiditra ny automatisation momba ny fampielezam-baovao RSS, ireo vokatra teknika amin'ny fanatsarana ny mpividy amin'ny fividianana vola. Ho an'ny mpitoraka blaogy mahatsikaritra zava-mahadomelina, ny fananganana ny lisitry ny lisitry ny mailaka dia ny fampiroboroboana ny orinasa iray.